EyeKhala 2018 | Gcina A Isitimela
Inyanga: EyeKhala 2018
ekhaya > EyeKhala 2018
Nguwuphi Ingaba oololiwe inamendu EYurophu And The World
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Ngaba wakha ayefuna ukundwendwela eYurophu yinto kweediliya, njenge uloliwe? ntoni umsindo ukuba zihamba njani 300 ngehora? IYurophu a womnatha enkulu koololiwe-high speed ukuba kuya kamsinya oya kuyo. iinkonzo kaloliwe-High speed kuphela…
Qeqesha ukuhamba iOstriya, Qeqesha ukuhamba iBritane, Qeqesha uhambo eFrance, Qeqesha uhambo eJamani, Qeqesha uHambo lwaseHungary, Uloliwe kuhambo Italy, Qeqesha uhambo ePortugal, ...
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu IYurophu i lizwekazi Kuyamangalisa ukuba ukuhlola! Izinto ezininzi kangaka ukubona, ukwenza fumanisa, ngayo yiloo ndawo ogqibeleleyo ukucwangcisa esingenasiphelo, Europe ahlangabezane ngololiwe. Eli nqaku yabhalwa ukuba afunde Train Travel kwaye yenziwa yi Gcina A Isitimela, Olona loliwe lubiza kakhulu…
Qeqesha uhambo eFrance, Uloliwe kuhambo Italy, Uloliwe eSpain, Iingcebiso zokuhamba, Uloliwe iTurkey, Qeqesha uKhenketho e-UK, Travel Europe...
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Enye yezona zinto zimnandi ohambahambayo eYurophu ukuba ungafumana khona ngololiwe yonke. Kubaluleke kakhulu ukwanda kwe zothutho kunye obathandayo abantu abaninzi ukuba bahambe ilizwekazi. Abantu musa ukubuza imibuzo ngaphambi kokuba isigqibo sokuba athathe…
Ixesha lokuFunda: 5 imizuzu Student ezinika Ngu Train e Europe ayikwazi kuphela mnandi, kodwa zemfundo eziya kuzuza lukhulu, kakhulu. Kubaluleke nangakumbi ukuba abafundi abaninzi (kunye nabazali) kunqabile cinga konke esisebenzayo, abafundi izakhono zokulawula ubomi kufuneka bafunde ukuze babe nokuzenzela, self-ngqo, uxanduva,…
4 Amacebo Ukuze Fumana Elona Out Of Your Train Journey
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Ukuba eli lixesha lakho lokuqala ehamba ngololiwe, akukho kwamathandabuzo iyakuba yokuqala abaninzi. Honestly, Nabani na onikwe ithuba lokuhamba ngololiwe ithuba uye waphambana kwaphela kulo! Ngoba? Ngokuba awuve! Ngokwahlukileyo ekhwela moya engenabuntu, ezithathwa ibhasi elibuhlungu, okanye…
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Ukuba uyazibuza indlela ukufika Tomorrowland ngololiwe, koko jonga kungabekwa. Incwadi amatikiti uloliwe wakho Tomorrowland kwangaphambili kunye nathi! Ukuba ungomnye wabantu nethamsanqa ukuba amatikiti ku Tomorrowland kulo nyaka, qiniseka ukuba ungazishiyi iinkcukacha zohambo…
Ixesha lokuFunda: 4 imizuzu Zilungiselele ukuba ophephuka kunye Italy ngololiwe ngalo mzuzu wena step unyawo ndizizise emhlabeni wayo ezinkulu. Ilizwe yomlando, izakhiwo omangalisayo, inkcubeko eyoyikisayo, kwaye intle kangaka, ephucukileyo, kwaye abantu abanesimilo baya kuba yinto oya kuyikhumbula kude kube ngumhla wakho wokugqibela!…
Indlela To Nandipha Holland eTulip Season
Ixesha lokuFunda: 3 imizuzu Ukuze ufumane Holland eTulip Season ngo Train ngokwenene elwe kwikhalenda na self-ngokuphathelele umhambi ehlotyeni xa. Ngenyanga okanye ngonyaka, emasimini kwiphondo Flevoland senziwa similise ulwandle entle olukhulu leentyatyambo bala engaphezu kwe-7…